I-washer yeefestile yanamhlanje kunye necocekile inetekhnoloji ekhoyo kubo eyiminyaka engaphambi kwetekhnoloji ukusuka kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Obu buchwephesha butsha busebenzisa ifayibha yekhabhoni kwiipali ezondliwe ngamanzi, kwaye oku kuye kwenza ukuba umsebenzi wokucoca ifestile ungabi lula kodwa ukhuseleke.
IiPolisi zeFed Water zezona nkampani zintsha zintsha kunye nezona ziphambili ziboniswa ngamanzi. Ezi zibonda zecarbon fiber zomelele, zikhaphukhaphu, kwaye zikhuselekile kubuchwephesha nakumthengi ngeendlela ezahlukeneyo.
Iipali zangaphambili ezondliweyo zamanzi zisebenzisa ialuminium kunye nefayibha yeglasi Ezi zibonda zazinzima, zinzima kwaye ziyingozi xa amanzi oxinzelelo oluphezulu ebaleka ngepali xa kucocwa ifestile. Iingozi ezisusela ekonzakaliseni amagcisa ukuya kwiifestile ezophukayo ngenxa yeepali ezinzima ezibetha iifestile zixhaphake kakhulu kwaye zonke sele zisonjululwe ngokungeniswa kwekhabhoni fiber kumzi-mveliso owondla ngamanzi.
Itekhnoloji engemva kwecarbon fiber ivelisa ipali eyomelele njengentsimbi kodwa ikhaphukhaphu ngomda obonakalayo. Ubunzima obuncitshisiweyo buthetha ukudinwa okuncinci kubuchwephesha, okuthetha ukuba umgangatho ongcono, okhuselekileyo kunye nokwanda kwemveliso nokucoca iifestile.
Ubungakanani beepali zamanzi eziqala kwi-15 ft. Ukuya kwi-72 ft. Zonke iipali zamanzi eziSulungekileyo zeGleam zisebenzisa izixhobo ezifanayo, ke akukho mfuneko yokuthenga izinto ezahlukeneyo zobude obahlukeneyo. Onke amacandelo epali ajoyina ngokukhawuleza kwaye ngokulula ngaphandle kwezixhobo ezizodwa. Ukungena kwamanzi, amacandelo abamba uxinzelelo lwawo nokuba zingaphi ubukhulu obahlukeneyo obuxhunyiwe.